Salary Negotiation – Do’s and Don’ts (Part – 1)
Tags: Knowledge-Salary-Negotiation-Dos and Don'ts-JobsInYangon
လစာငွေညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ရာတွင် ဆောင်ရန်/ ရှောင်ရန်များ (အပိုင်း - ၁)
အလုပ်လျှောက်လွှာတင်တဲ့အခါမှာ သင့်အနေနဲ့ဒီမေးခွန်းကို သင့်ကိုယ်သင်မေးမြန်းခဲ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ် - အလုပ်ရှင်ကို ငါတောင်းဆိုလိုတဲ့ လစာပမာဏကိုပြောပြရင်ကောင်းမလား? သူတို့အနေနဲ့ ငါတောင်းတာအရမ်းများလွန်းတယ်လို့ ထင်သွားနိုင်သလား? ဒီပမာဏကို သူတို့က မပေးလိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ဒီမေးခွန်းများဟာ အလုပ်လျှောက်ထားလာသူများအနေနဲ့ လစာငွေညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်စဉ်တွင် မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်လေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အလုပ်ခွင်သို့ အသစ်စတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့သူများအနေနဲ့ ဒီမေးခွန်းများကို မေးမြန်းကြည့်ခဲ့ကြဖူးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လစာငွေကို ရယူလိုပါက ထိုသို့ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကို မှန်ကန်သောနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတွက် ယခုအပတ်ဆောင်းပါးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ www.jobsinyangon.com အဖွဲ့သားများကနေ Job offer များနှင့် လစာငွေတိုးမြှင့်မှုများကို ညှိနှိုင်းရာတွင် တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးလစာငွေများကို ရရှိနိုင်စေရန်အတွက် ဆောင်ရန်/ ရှောင်ရန် အချက်များကို ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီတော့ . . . သင်ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
လေ့လာပါ/ သုသေသနလုပ်ပါ - သင့်ရာထူးနဲ့ တူညီတဲ့ အခြားသူများအနေနဲ့ လစာဘယ်လောက်ရလေ့ရှိကြသလဲဆိုတာကို အလုပ်အင်တာဗျူးသို့ မသွားရောက်မှီတွင် အသေးစိတ်လေ့လာမှုပြုလုပ်ပါ။ သင်လျှောက်ထားလိုတဲ့ရာထူးအား ထိုနေရာအနီးတဝိုက်တွင်၊ သင့်နဲ့တူညီတဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိနေသူတစ်ဦးအဖို့ ကနဦးလစာငွေ ပျမ်းမျှ ဘယ်လောက်ရနိုင်သလဲဆိုတာကို သိရှိထားနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားပါ။ ဖြစ်နိုင်ပါက အဆိုပါလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပေးအပ်ထားတဲ့ လစာငွေပမာဏများကို ရှာဖွေလေ့လာပါ။ Online ပေါ်တွင် ကြည့်ရှုပါ၊ review များကို ကြည့်ရှုပါ၊ မေးခွန်းများမေးမြန်းကြည့်ပါ။ သင်လျှောက်ထားလိုတဲ့အလုပ်နယ်ပယ်မှာ သင့်ဘက်ကကျွမ်းကျင်မှုရှိနေမှသာ လစာငွေညှိနှိုင်းမှုများကို ပိုမို၍ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လက်တွေ့ကျကျဝေဖန်သုံးသပ်ထားဖို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့တန်ဖိုးကို ထုတ်ဖော်ပြသပါ - အလုပ်အင်တာဗျူးများ (သို့) လစာငွေတိုးမြှင့်ပေးဖို့အတွက် ပြောဆိုကြရာတွင် သင့်ဘက်က ဘာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးထားသလဲဆိုသည်အား အမြဲပြောကြားပါ။ သင့်ထံတွင်မည်သို့သောကျွမ်းကျင်မှုများရှိနေပြီး ဒီအရာများက သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအပေါ် မည်သို့သော ပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်မလဲ ဆိုသည်အားထုတ်ဖော်ပြောကြားပါ။ သင်ကြိုးကြိုးစားစားရှာဖွေခဲ့ရတဲ့ ငွေကြေးကို ထုတ်ကုန်တစ်ခု (သို့) ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအား ဝယ်ယူခြင်းမပြုမှီတွင် ဒီအရာတွေက သင့်ကိုပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်တဲ့တန်ကြေးကို သင့်ဘက်က အမြဲလိုလိုဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုများပြုလုပ်သကဲ့သို့ပင် အလုပ်ခွင်ဈေးကွက်တွင်လည်း ထို့နည်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုဈေးကွက်တစ်ခုအနေနဲ့ မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ - ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို တန်ကြေးတစ်ခုသတ်မှတ်၍ ရောင်းဝယ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် သင်ဟာဘယ်လောက်တန်ကြေးရှိသလဲဆိုတာနှင့် သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ပမာဏကို ရရှိဖို့ ထိုက်တန်သလဲဆိုတာဟာ တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိရဲ့တန်ဖိုးကို ကိုယ်တိုင်သိရှိထားခြင်းမရှိပါက ကုမ္ပဏီများဘက်မှ သင့်အားမှားယွင်းစွာ အကဲဖြတ်မိပါက သင့်အနေနဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့လစာငွေကို ရရှိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတွက် ညှိနှိုင်းမှုများကိုပြုလုပ်ရာတွင် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍သင်က Job Offer တစ်ခုကို potential employer တစ်ဦးနှင့် ညှိနှိုင်းနေပါက သင်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့လစာငွေရရှိရန်အတွက် သင့်ဘက်က ဘာတွေကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုသည်အား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပါ။ ယခင်အလုပ်များတွင် သင်ရရှိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုများကို ဥပမာပေးပါ။ သင့်လက်ရှိအလုပ်ရှင်ထံမှ လစာငွေတိုးမြှင့်ပေးဖို့အတွက် တောင်းဆိုလိုပါက သင့်လုပ်ငန်းရှင်အတွက် အကျိုးရှိစေခဲ့တဲ့ သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကို အသားပေးပြောဆိုပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် သင့်ဘက်က အကြောင်းပြချက်ကို ပိုမို၍ ခိုင်မာလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
လစာ/ အကျိုးခံစားခွင့်များအားလုံးကို ခြုံငုံ၍စဉ်းစားပါ - ကုမ္ပဏီဖက်မှ သင့်ကိုပေးအပ်ထားတဲ့ အခြားသောအကျိုးခံစားခွင့်များရှိပါသေးသလား? ဒီအရာတွေဟာ သင့်အနေနဲ့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့ အရာများဖြစ်ပါသလား? Compensation package တစ်ခုတွင် လစာငွေဟာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့အရာများတွင် တစိတ်တစ်ပိုင်းသာပါဝင်နေတဲ့အတွက် လစာငွေတစ်ခုတည်းအပေါ် အာရုံစိုက်မထားပါနဲ့။ အခြားသောအကျိုးခံစားခွင့်များဖြစ်တဲ့ ကုမ္ပဏီမှ အကုန်အကျခံ၍ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း၊ ဘောနပ်စ်များ၊ အားလပ်ရက်များ၊ အခြားအပိုဆောင်းပေးငွေများ အစရှိသည်ဖြင့်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင့်ရဲ့ဘဝကိုပိုမိုကောင်းမွန်လွယ်ကူလာစေမယ့်အရာများ၊ သင့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုများကို တိုးပွားလာစေမယ့်အရာများ (ဒါမှမဟုတ်) အချိန်ကုန်ပိုမိုသက်သာစေမယ့် အရာများ ဒါတွေအားလုံးဟာ ပိုက်ဆံပိုရလာစေတတ်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများဖြစ်ကြလို့ပါပဲ။
လစာငွေသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကိုပေးပါ - အလုပ်နေရာအသစ်တစ်ခုအတွက် ညှိနှိုင်းမှုများကို ပြုလုပ်ရာတွင် သင့်ရဲ့လစာအနေနဲ့ ရရှိလိုတဲ့ပမာဏကို ခန့်မှန်းခြေအနေနဲ့ ပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပေးထားခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီလိုပြုလုပ်ထားပေးခြင်းအားဖြင့် ကိန်းသေတစ်ခုတည်းကိုသာ ဖော်ပြထားသည့်အလုပ်လျှောက်လွှာထက် ပိုမို၍ ညှိနှိုင်းမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်စေဖို့အတွက် လမ်းစကိုဖွင့်ဟပေးနိုင်ပါတယ်။ အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ သင့်ဘက်က ဘယ်လောက်အထိလျှော့ပေးနိုင်သလဲဆိုတာကို ဦးစွာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါ၊ ပြီးနောက် သင့်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာနိုင်သူဖက်မှ သင်လိုချင်တဲ့လစာငွေပမာဏကို ပေးအပ်လိုခြင်းမရှိပါက သင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုလည်း စဉ်းစားထားပါ။ ဥပမာ - အခြားသောအကျိုးခံစားခွင့်များဖြစ်တဲ့ အားလပ်ချိန်အပိုတောင်းခံခြင်း၊ ဖုန်းဘီလ်တောင်းခံခြင်း၊ တစ်ပတ်လျှင် ကြိုက်ရာတစ်ရက်နားခွင့် (သို့) တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် အလုပ်စောဆင်းခွင့် အစရှိသည်တို့ကိုစဉ်းစားထားပါ။ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများကို ပြုလုပ်ရာတွင် flexible ဖြစ်နေပါစေ။
အကြံပြုချက်များတောင်းခံပါ - အတွေ့အကြုံရှိပြီးသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းများထံမှ အကြံဉာဏ်များကို တောင်းခံဖို့မကြောက်ပါနဲ့။ အလုပ်အင်တာဗျူး (သို့) လစာငွေပြန်လည်စီစစ်မှု (Salary Review) တစ်ခု မစတင်မှီတွင် သင်ယုံကြည်ရတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကိုဆက်သွယ်၍ သင့်ရဲ့လစာငွေသတ်မှတ်ချက်ဟာ မည်မျှလောက်ရှိနေသင့်သလဲ (သို့) ထိုအရာကိုရရှိနိုင်ရန် သင်မည်သို့ ပြုလုပ်သင့်သလဲဆိုသည်အား အကြံတောင်းခံကြည့်လိုက်ပါ။
ဒီသို့အကြံဉာဏ်တောင်းခံလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သင့်အနေနဲ့ မည်သူကိုချဉ်းကပ်သင့်သလဲဆိုသည်နှင့် သင့်ရဲ့ case ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုသည့်အပေါ် တန်ဖိုးရှိတဲ့အကြံပြုချက်များကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်သလို ယခင်က သင့်ရာထူးနေရာတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသောသူများရဲ့ လစာငွေညှိနှိုင်းမှုဟာ မည်သို့ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာများကိုပါ သိရှိရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်တွင် ဆက်လက်ပြီး လစာငွေညှိနှိုင်းမှု ပြုလုပ်စဉ်အတွင်း မပြုလုပ်သင့်သည့်အချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။